Ireo morontsiraka sy nosy tsara indrindra any Filipina (Fizarana 1) | Vaovao momba ny dia
Ireo morontsiraka sy nosy tsara indrindra any Filipina (Fizarana 1)
Travel asia | | Filipina, Fitsangatsanganana any Azia
Raha tianao tora-pasika nofinofy dia tsy maintsy mametraka ianao Filipina amin'ny radaranao. Azo antoka fa toerana fialantsasatra fahavaratra io.
Mba handaminana tsara ny dia dia tokony ho fantatrao bebe kokoa ny amin'ireo nosy sy ny morontsirak'izy ireo, ka soraty ireo soso-kevitra mba tsy hanadino ny tsara indrindra.
Firenena nosy izy ka mandrafitra azy nosy an'arivony. Izany dia manahirana ny mandray ireo chips rehetra rehefa manapa-kevitra ny hanao dia ary noho izany antony izany dia tsara ny mieritreritra tsara momba ilay lalana. Ny sidina anatiny no mahazatra ary izany no antony hijerena ny pejin'ny Cebu Pacific, zotram-piaramanidina mora vidy.
Ny kely noho ny Nosy zato 7 arivo dia mizara ho faritra telo: Luzon, izay misy an'i Manila, renivohitra, Mindanao y Ny Visayas.
Any Luzon dia azonao atao ny mamakivaky ireo manan-tantara Manila ary zahao ny lova tandrefana, fa ianao kosa afaka mitsangantsangana eo afovoany tanimbary mahatalanjona eo amin'ny enina ora eo ho eo.
Misy terraces ao Batad, Banaue, Sagada ary Bontoc ary afaka mandeha irery ianao na misoratra anarana hitsangatsangana ary hahafantatra, ohatra, Bontoc sy Sagada tamin'ny fitsangatsanganana iray ihany.
Eny, manana toetrandro sarotra izy io koa misy vanim-potoana maina, iray mando ary vanim-potoana mafana, mirona ho maina. Ny voalohany dia ny volana martsa ka hatramin'ny mey, ny mando eo anelanelan'ny volana jona sy novambra ary ny farany dia ny desambra ka hatramin'ny febroary Mafana foana.
Farany, vaksinina ve ianao? Ilaina ny fananana ny Vaksinin'ny Tetanus, Diphtheria, ary Hepatitis A sy B. Ny fahafantarana izany rehetra izany dia afaka miroso amin'ny tanjona tsara indrindra eto Filipina isika izao.
Izany dia nosy tsara tarehy izay mihoatra ny 300 kilometatra miala an'i Manila, any amin'ny Nosy Visayas. Sahabo ho 10 kilometatra toradroa ny velarany ary ny morontsiraka no nahatonga azy io ho iray amin'ireo toerana fizahan-tany malaza indrindra.
Tsy misy seranam-piaramanidina Ny azy manokana dia tratry ny ranomasina avy any amin'ny nosy akaiky an'i Panay sy ny seranan-tsambony, Caticlan. Afaka mankany ianao amin'ny alàlan'ny fiaramanidina na sambo avy amin'ny nosy mifanakaiky aminao na avy any Manila. Ho hitanao fa misy roa seranam-piaramanidina akaiky izay atolotra foana: Caticlan sy Kalibo.
Raha vantany vao misy amin'izy ireo dia tsy maintsy mandeha an-tanety mankany amin'ny seranana ianao ary avy eo maka ny sambo. Airport Caticlan Akaiky kokoa izy io ary zara raha misy dimy minitra raha ny 90 no minitra manasaraka ny seranan-tsambon'i Kalibo. Tena mora ny fitaterana, eny.
Ny dia an-tsambo mankany amin'ny nosy Boracay, sambo mihoatra ny sambo, mora ihany koa izy io ary fohy dia fohy, dimy minitra miaraka amin'ny ranomasina milamina. Amin'ny lafiny iray hafa dia afaka mandray bisikileta mankany amin'ny toeram-ponenanao ianao.
Boracay dia zaraina ho faritra manodidina o ny an'ny barangay. Ny faritra fizahan-tany be indrindra, misy ny bara sy trano fisakafoanana dia ny barangay Yapak, any avaratra. Avy eo koa ny tanàna Balabag, eo afovoany, ary ny atsimo dia ny tanàna Manoc-Manoc.
Raha hilaza ny marina ireo anarana ireo dia tsy ho henonao loatra, dia tsy ho hitanao akory ao amin'ny magazay na bilaogy fitsangatsanganana satria amin'ny ankapobeny nantsoina izy ireo Station 1, 2 ary 3.
Noho izany, ny Station 1 dia fitambaran'ny fety fiainana miaraka amin'ny milamina indrindra, misy kely ny zava-drehetra. Ankehitriny, raha mandeha eny amoron-dranomasina ianao dia miditra kely Station 2 izay ivon-toeran'ny antoko, ny tabataba sy ny diabe.
Manaraka ny làlana tonga any amin'ny Station 3 ianao, izay ranomasina fitoniana. Ny zavatra tsara dia tsy misy tsy fisian'ny trano fisakafoanana, fivarotana, fivarotana lehibe ary fivarotana fanomezana ao amin'izy ireo.
Raha tianao ny traikefa nahafinaritra afaka mankany ianao amin'ny alàlan'ny sambo avy any Manila Saingy lavitra kokoa ny dia, manodidina ny sivy ora, fa ny zava-dehibe dia ny tonga ary mankafy ny iray amin'ireo torapasika telo-polo.
Azo antoka fa misy malaza kokoa noho ny hafa: Tora-pasika fotsy Io ilay eo amin'ny toerana voalohany miaraka amin'ireo kilometatra fotsy efatra. Misy koa ny Diniwid Beach ary ny Pukka na ny Bulabog Beach, ny tsara indrindra ho an'ny kitesurfing na Windurfing.
Ary koa ao amin'ny Visayas dia ny faritanin'i Palawan sy ny ao renivohitra dia Puerto Princesa. Nilaozana ny antsasany ary fantatra amin'ny anarana hoe ny sisintany ekolojika farany an'i Filipina.
Any avaratra dia misy rano mangarahara, misy zavamaniry sy zavamaniry ary torapasika fotsy. Io no toerana misy azy El Nido sy Taytay, toerana fizahan-tany roa zava-dehibe. Mampiavaka azy ireo ny hantsana vatolampy vatosokay sy hatsaran-tarehy ambonimbony sy ambanin'ny rano miaraka aminy trondro sy haran-dranomasina ary sokatra an-dranomasina mihitsy aza.
Afaka mandeha any Palawan amin'ny fiaramanidina ianao ary ny hifindra any dia mampiasa bus ianao. Tsy afaka mitsahatra mitsidika ny Coron Reefs, amin'ny helodranon'io anarana io ihany: farihy fito voahodidin'ny hantsana, toerana milomano sy snorkel amin'ny sisa tavela amin'ny sambo sy fiaramanidina tamin'ny Ady lehibe faharoa.
El Valan-javaboary ao amin'ny renirano Puerto Princesa Hampiharihary ity tontolo ambanin'ny tany mahafinaritra an'ity renirano ity izay mipoitra ao anaty ranomasina ary manankarena harena voajanahary. Ity valan-javaboary sy valan-dranomasina iray hafa, ny Tubbataha Reef, efa nambara Lova Iraisam-pirenena UNESCO.
Raha te hifindra ianao dia afaka mitsidika ny tanàna fanjonoan'ny San Vicente izay akaiky an'i Puerto Princesa. Tonga amin'ny sambo ianao ary mankafy ny Long Beach misy fasika fotsy 14 kilometatra toy ny lafarinina.
Any atsimon'ny vondronosy, any Central Visayas. Manana morontsiraka fotsy mahafatifaty izy ary malaza amin'ny tontolo mahafinaritra izay natao batisa tamin'ny anaran'ny Chocolate Hills: havoana vatosokay misy kôlônika marobe nozaraina amin'ny faritra 50 kilometatra toradroa.
Tafasaraka amin'ny nosy Cebu izy, toeran-kafa mahaliana iray, amin'ny tery iray ka mora ny mandeha sy mivoaka. Ny Nosy Virgin dia manintona iray, miaraka amin'ny lelany fotsy izay mandro amin'ny morontsiraka roa amin'ny morontsiraka, ary ny Lamanoc Island, nosy kely iray ao Anda izay tena simba tanteraka ary ny fisehoan'ny nosy dia vato kokoa noho ny mitsingevana anaty ranomasina .
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Filipina » Ireo morontsiraka sy nosy tsara indrindra any Filipina (Fizarana 1)
Kaiurán, tanànan'ny moske 300 any Tonizia
Fitsidihan'ny toekarena any Andalusia (II)